केन्यासँग नेपाल पराजित « News of Nepal
केन्यासँग नेपाल पराजित
आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपअन्तर्गत पाँचौ चरणको पहिलो खेलमा पटक पटक वर्षाको असर परेपछि नेपाल ५ विकेटले पराजित भएको छ .
शनिबार कीर्तिप’रस्थित त्रिवि मैदानमा भएको केन्यावि?द्धको पहिलो खेल हारेपछि नेपालले महत्वप“र्ण द’ई अंक समेत ग’मायो . आठ टोली सम्मिलित उक्त च्याम्पियनसिपमा ६ अंकसहित छैटो स्थानमा रहेपछि नेपालको लागि आगामी विश्वकप क्रिकेट छनोटमा सहभागि बन्ने योजना पनि कठिन बन्दै गएको छ . साथै नेपालले आगामी सोमबार कीर्तिप’रमा ह’ने दोस्रो खेलमा जित्नै पर्ने दवाव बढेको छ .
वर्षाको कारण ५) ओभरको खेल ३८ ओभरमा खेलाइएको थियो . नेपालले टस हारेर ब्याटिङ गरेको थियो . नेपालले ३६ ओभरमा ८ विकेटको क्षेतिमा ! सय !२ रन बनाउँदा फेरि पानी परेर खेलमा असर ग¥यो . त्यसपछि डकवर्थ लेविस पद्धतिअन’सार नेपालले २( ओभरमा ! सय ४ रन लक्ष्य पाह’ना टोलीलाई तेर्सायो .
केन्याले लक्ष्य पछ्याउने क्रममा २!.२ ओभरमा ५ विकेटको क्षेतिमा ८) रन जोड्दा पानीले फेरि व्यवधान गरेरै छाड्यो . यसपछि नयाँ लक्ष्य २६ ओभरमा (४ रन बनाउन’पर्ने . केन्याले २४.! ओभरमा ५ विकेटको नोक्सानीमा (८ रन बनाएर नेपाली टोली र पानीमा भिजेका दर्शकलाई समेत निरास त’ल्यायो . नेपालका बलरमा सन्दीप लामिछाने र सागर प’नले २÷२ विकेट लिएका थिए . केन्याका कप्तान राकेब पटेलले नटआउट ३४ रन बनाउन’ नै नेपालको जितमा वर्षा पछि खलनायक बनेको थियो .
यसअघि नेपालको ब्याटिङ कमजोर देखिएको थियो . नियमित कप्तान पारस खड्काको कमी श’?देखि नै महस’स गरिएको थियो . तीन साता अगाडि अपेन्डिक्सको शल्यक्रिया गराएर आराम गरेपछि पारसले हिजोको खेलमा खेल्न पाएनन् . उनको अन’पस्थितमा केन्याका बलरले श’? देखि नै नेपाली ब्याटसम्यानलाई अंक’स लगाएपछि नेपालले ख’लेर खेल्न सकेन . प्रारम्भिक जोडी ज्ञानेन्द्र मल्ल र स’नील धमलाले गतिलो श’?आत दिलाउन पनि विफल भए .
श’?आत नै कमजोर भएपछि नेपालले ३६ ओभरमा ८ विकेटको क्षेतिमा ! सय !२ रन जोडेको थियो . नेपालको लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक २७ रन जोडे भने राष्ट्रिय टोलीमा डेब्य’ गरेका दीपेन्द्रसिंह ऐरीले !( रन बनाएका थिए . नेपालको क’नै विकेटमा ठ“लो साझेदारी पनि ह’न सकेन . नेपालका भरोसामन्द ब्याटसम्यान सागर प’न, सरद भेषवाकर, मेहब’ब आलमले निरस ब्याटिङ प्रस्त’त गरे . तर प’छारमा सोमपाल कामी र शक्ति गौचनले केही राम्रा सट प्रहार गरेर नेपाललाई सम्मानजनक स्कोरमा प’¥याएका थिए . शक्तिले !८ र सोमपालले !५ रन योगदान दिएका थिए .